एक विधेयक पारित, तीनमा छलफल सकियो
टुडे समाचारदाता जेठ १६, २०७५
जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को दोश्रो अधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । अन्य तीन वटा विधेयकमा छलफल पुरा भएको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी, स्थानीय तहको सेवा सुविधा सम्बन्धी र स्थानीय तहको बैठक संचालन सम्बन्धी विधेयकमा मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको थियो । छलफल पुरा भएर लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक पारित भएको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म तीन वटा विधेयक पारित गराउन सफल भएको छ । यसअघि आर्थिक कार्यविधि र चालु आवको बजेट पारित भएर प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव, प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश नं. २ को गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियो भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो ।यसैगरी मन्त्री यादवले प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ समेत पारित भएको छ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ २१ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।